हिउँदमा पनि लोडसेडिङ नहुने कुलमानको दाबी - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | ५ पुष २०७३, मंगलवार ०२:०९ |
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यसपटक हिउँदमा समेत लोडसेडिङको तालिका नआउने प्रष्ट पारेको छ ।
कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुनासाथ राजधानी उपत्यका र आपसापका जिल्लामा लोडसेडिङ अन्त्य भएको थियो । तिहारको झिलिमिलीपछि लोडसेडिङ बढ्ने त्रास भएकोमा त्यस यता पनि लोडसेडिङ भएको छैन ।
दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ खेपेका जनता कुलमानले चमत्कार गरेको विश्वासमा छन् । किनकी १३ वर्षदेखि जनता अध्यारोको प्रताडना भोग्न बाध्य थिए। अहिले विद्युत प्रणालीमा बिजुली नथपिए पनि लोडसेडिङ समाप्त भएको छ।
त्यही जिज्ञासा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले एक राष्ट्रिय दैनिकसँगको कुराकानीमा अब लोडसेडिङको तालिका नआउने बताएका हुन्। उनले उपभोक्तालाई ढुक्क हुन समेत आग्रह गरेका छन्।
Previousमोडल र नायिका बनाइदिने प्रलोभन देखाई बलात्कार
Nextनेपाल भ्रमणमा आउने चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको आश्वासन
अनशनरत डा. केसीको घाँटीमा संक्रमण
३२ असार २०७५, सोमबार ०२:४३
१३ माघ २०७२, बुधबार ०२:१९
भाइबर र ह्वाट्सएपमार्फत बढ्यो ठगी !
१ मंसिर २०७४, शुक्रबार ०१:२९